January 12, 2021 - Achawlaymyar
ကိုယ်ဘက်က ဘယ်လောက် ချစ်နေပါစေ.. သူဘက်က တန်ဖိုးမထားရင် အမှိုက်ပဲ
January 12, 2021 by Achawlaymyar
မိန်းမတယောက် ယောက်ျားတယောက်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် သေအောင်ဆိုးလည်း သီးခံတယ် အပြစ်တွေလုပ်လည်း ခွင့်လွှတ်တယ် အချိုးမပြေလည်းပြုပြင်ယူတယ်အားနည်းချက်ရှိလည်းနားလည်ပေးတယ် ကိုယ့်ကိုဂရုမစိုက်ရင်တောင် အလုပ်ရှုတ်နေလို့ဆိုပြီး ဖြည့်တွေးတယ် သူကြောင့် ကိုယ်တနေ့လုံးငိုရတာကို သူကြောင့်ကိုယ် တစ်နာရီလောက် ရယ်မောရတာကို ပြန်တွေးပြီးတော့ ပိုပြီးချစ်တက်ကြတယ် အများစုကပြောကြတယ် မိန်းမဆိုတာ ကိုယ့်ကိုမျက်ရည်ကျအောင် ငိုစေအောင်လုပ်တဲ့သူကိုမှ ပိုပြီးချစ်တက်ကြတယ်တဲ့ အဲ့ဒါမှားတယ် မျက်ရည်ကျအောင်လုပ်တဲ့သူမှ ချစ်တာမဟုတ်ဘူး မိန်းမဆိုတာ သူတကယ်ချစ်မှသာ ယောက်ျားတယောက်အတွက် မျက်ရည်အကျခံတာပါ မချစ်မှန်းမချစ်လို့ကတော့ တဘက်ယောက်ျား ကိုယ့်ကိုသေအောင်ချစ်ပြနေလည်း ရင်တောင်မခုန်ဘူး သဲသဲလှုပ်အောင် ချစ်ပြလေ အမြင်ကပ်လေပဲ အနားကမခွာလေ ပိုပြီး ကြည့်မရလေပဲ ကိုယ့်အပေါ် ဂရုစိုက်လေ ချေချင်လေ ကိုယ်ကြောင့် ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့ ငိုရင်တောင် ဘာလားဟ ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့နဲ့ မျက်ရည်လွယ်တယ် ဆိုပြီးတော့တောင် $မြင်ကပ်ပုဒ်မ ထပ်တိုးသွားနေအုံးမယ် ကိုယ့်မှမရလို့ သေပါမယ်ပြောတောင် … Read more
အံ့သြသွားစေမယ့် ကြက်သွန်နီဥ ခြေဖဝါးလေးမှာကပ်ပြီး အိပ်ကြည့်ရင် ရမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ…
ကြက် သွန် နီ ဟာ မြန်မာ တို့ရဲ့ မီးဖိုချောင်တိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်ပြီး ဟင်းတိုင်းလိုလိုမှာ ထည့်သွင်း ချက်ပြုတတတ် ကြပါတယ်။ အသုပ်တွေမှာလည်း ထည့်သုပ်ကြသလို ကြော်ပြီးလည်း စားကြပါတယ်။ ကြက်သွန်ဟာ စားရုံသာမက ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ အရာလည်း ဖြစ်တာကြောင့် အိမ်သုံးဆေးဝါးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။ တရုတ်ရိုးရာ ဆေးနည်းမှာတော့ ကြက်သွန်နီကို ခြေဖဝါးအောက်မှာထားပြီး အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကောင်းကျိုးများစွာရှိတယ်လို့ ဆိုစမှတ် ပြုထားပါတယ် …။ ခြေ ဖ ဝါး ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အာရုံကြောတွေ စုဆုံရာ အရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေဖဝါးမှာရှိတဲ့ အကြောတွေကို ကောင်းမွန်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်က ကျန်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကျန်းမာစေတယ်လို့ တရုတ် ဆေးပညာ မှာ ဖော်ပြထားတာပဲ … Read more
ချစ်သူက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် မိန်းကလေးတွေ လုပ်တတ်ကြတဲ့ အချက်(၅)ချက်…
သင့်ကို တစ်သက်လုံးချစ်သွားမယ့် ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာများ
အချစ်ရေးကံမကောင်းလို့ အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် လွဲချော်ခဲ့တာတွေ၊ ချစ်သူဘ၀က ပြတ်ဆဲခဲ့တာတွေ၊အိမ်ထောင်သည်ဘ၀မှာ ကွာရှင်းကြတာတွေ ရှိနေတာကို မြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အမှန်တော့တစ်ယောက်က ထားသွားလို့၊ တစ်ယောက်က ကျန်နေခဲ့ ရတာ ပါဘဲ။ ဒါဆိုရင် သင်လက်တွဲနေတဲ့ သူဟာ သင့်ကို ထားသွား/မသွား ဘယ်လို ပုံစံတွေကို အကဲခတ်ပြီး သိနိုင်မလဲ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာလေးတွေ ကတော့ သင့်ချစ်သူက သင့်ကို လုံးဝ ပစ်ခွာမသွားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သက်သေတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ 1. သင့်ကို အနိုင်ကျင့်စော်ကားတာတွေ မလုပ်တဲ့သူ” ကိုယ်ချစ်လို့ လက်တွဲနေတာပဲ ဘာလို့အနိုင်ကျင့် ရမှာ လဲလို့ စောဒက မတက်ကြ ပါနဲ့။ အဲဒီလိုပဲ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ ရိုက်ကြနှက်ကြ၊ သတ်ကြဖြတ်ကြတဲ့ ကိစ္စတွေမှ မနည်းဘူး။ အဲဒီလို အချစ်မျိုးကျတော့ … Read more
ဆံသားပျက်ဆီး သင်နေ့တိုင်း လုပ်နေမိတဲ့ အမှား ၉ ခု။ အမျိုးသမီးတွေဟာ မျက်နှာပြီးရင် ဒုတိယ ဂရုအစိုက်ဆုံးက ဆံကေသာပါပဲ။ ဆံပင်ဟာ မိန်းကလေးတို့ရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းလျှော်ရည်တွေ ပေါင်းဆေးတွေသုံးကြသလို ဆံပင်ကိုလည်း အမျိုးမျိုး ပုံသွင်းကြပါတယ်။ ဆံပင် အလှပြုပြင်တဲ့ Salon တွေလည်းသွား ရတာ မကြာခဏ ပါပဲ။ဆံပင်ကျွတ်ရတဲ့ အဓိအကြောင်းရင်းနဲ့ ဆံသား ပျက်ဆီးရတဲ့ သင်နေ့တိုင်း လုပ်နေတဲ့ အမှားတွေကို သင်သိပြီးပြီလား။ ခေါင်းမကြာခဏလျှော်ခြင်း တစ်ရက်ခြား တစ်ခါလိုလို ခေါင်းလျှော်တာ ကလည်း ဆံပင်ကို ကျွတ်စေ ပါတယ်။ အဆီပြန်တတ်တဲ့ ဆံပင်ဆိုရင် အလွန်ဆုံး ၂ ရက်ခြားတစ်ခါသာလျှော်သင့် ပါတယ်။ သာမန်ဆံပင်မျိုးဆိုရင်တော့ တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ် သာလျှော်ပါ။ အမြဲတမ်း ဆံပင်ပုံသွင်းတယ် … Read more
သင့်ရဲ့ 2021 အတွက်ကံဇာကို ဂဏန်းဗေဒင် ဟောစာတမ်းတွက်ကြည့်ရအောင်
ဝါသနာပါရင်တွက်ကြည့်ပါရာနုန်းပြည့်တော့မမှန်ဘူးနော် တနှစ်ချင်းဖြစ်ပျက် တစ်ဦးချင်းအတွက် ဂဏန်းဗေဒင် ဟောစာတမ်း တွက်နည်း မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်မွေးရက် + မွေးလနဲ့သိချ င်တဲ့ နှစ်၊ ကိုအားလုံးပေါင်း၍ တစ်လုံးတည်းသောဂဏန်းကိုယူပါ။သိလိုသူ၏ မွေးရက် + မွေ လ ကို ရောက်ရှီသောသက္ကရာစ်နဲ့တစ်လုံးရအောင်ပေါင်းရတဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ=4-1-2004မွေးဖွားသူအားတွက်လျှင် မွေးရက်=4=4 မွေးလ=1=1 ရောက် ဆဲနွစ်=2021=5 အားလုံး ပေါင်း=4+1+5=10=1+0=1 နောက်ဆုံး တစ်လုံးထဲ ကျန်တဲ့ ဂဏန်း ကို ကြည့်ပါ။ နောက်ဆုံးတစ်လုံးထဲ1ရပါတယ် 1 ဂဏန်းအဟောကို ဖတ်ရုံပါပဲ၊အမျိုးတွေအားလုံးလည်း အဲ့ဒီတွက်နည်းအတိုင်း တွက်ပြီး ရတဲ့ဂဏန်းကိုဖတ်ပါ။ 1 #ဂဏန်းရသောနှစ် အကြံအစည်သစ်တွေ၊လုပ်ငန်းသစ်တွေ၊ အတွေ့ကြုံသစ်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်က့တော့ ငါတစ်စုံတစ်ခုရတော့မှာပဲလို့ စိတ်ထဲမှာ ထားပါ။ အိုးသစ်အိမ်သစ်ဘဝသစ် စရသောနှစ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်အကောင်းမဟုတ်သလိုအဆိုးလဲမဟုတ်တော့ပါအတိုက်အခံရန်ရှီနေမည်ဂူတလုံးခြင်္သေ့နှစ်ကောင်အောင်းကိန်းနှစ်ဖြစ်ပါသည်။2#ဂဏန်းရသောနှစ် ဘယ်သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကကြားကဝင် ဖြန်ဖြေပေးရတတ်တယ်။ … Read more
အသည်းနင့်နေအောင်ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅) မျိုး
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်က ခန့်မှန်းရခက် ပါတယ် ။ အကြောင်း ကတော့ စိတ်ထဲရှိတာက တစ်ခြား၊ အပြုအမူက တစ်ခြားဖြစ်နေတတ် လို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက မိန်းကလေးတွေဟာ အရမ်းဂရိုစိုက်ခံချင်၊ အရမ်းအချစ်ခံ ချင်တဲ့ သူတွေပါ။ အဲလို ဂရုစိုက်၊ အချစ်ခံရအောင်လည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိးစား တတ်ကြ ပါတယ်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးမှာ ကတော့ ချစ်သူ အပေါ်မှာ ဆိုးပေမယ့် တကယ်တမ်း ရင်ထဲမှာကျတော့ နင့်နေအောင်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ(၅)မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးတွေက ကလေးဆန် တာလေး ကလွဲရင် သင့်အတွက် အစစအရာရာ ပြည့်စုံတဲ့ သူဖြစ်လို့ လက်လွှတ် မခံသင့် ပါဘူးနော် (၁) ဒေါသကြီးတတ်တယ် ဒီလို မ်ိန်းကလေးတွေက ဒေါသ အရမ်းကြီး ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် … Read more
ဆံပင်အရမ်းကျွတ်ပြီး ပါးနေသူတွေအတွက် ဆံပင်အုံထူလာစေမယ့် နည်းလမ်း
ဆံပင်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်အတွက် ရုပ်ရည်သွင်ပြင်အလှအပတစ်ခုတည်းအတွက် ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ လိုအပ်ချက်အရ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တခြားသောအစိတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ ထိခိုက်ပျက်စီးတတ်၊ အားနည်းတတ်လို့ သေချာလေးဂရုစိုက်ပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဆံပင်တွေ အရမ်းကျွတ်ပြီး ပါးလာမယ်၊ ပြားကပ်နေမယ်ဆိုရင် လူလည်းမကျန်းမာတဲ့ပုံစံပေါက်နေပြီး ဘယ်လိုမှမလှနိုင်တာမို့ ဒီနည်းလေးတွေနဲ့ ပြန်ပြီး ဂရုစိုက်ပေးလိုက်ပါ ။ (၁) ကြက်ဥနဲ့ဒိန်ချဉ်ပေါင်းတင်နည်း ကြက်ဥတစ်လုံးလုံးကို ဒိန်ချဉ်အနည်းငယ်နဲ့ရောမွှေပြီး ဦးရေပြားနဲ့ဆံပင်အနှံ့လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ တစ်နာရီလောက်ထားပြီး ရေအေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ပေးပါ။ ချည်သားတဘက်လေးနဲ့ သုတ်ပြီး hair dryer မသုံးဘဲသဘာဝအတိုင်း အခြောက်ခံပေးပါ။တစ်ကြိမ်လုပ်ရုံနဲ့ဆံပင်ကျွတ်တာ သိသိသာသာရပ်တန့်သွားပြီး တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်လုပ်ပေးရင် ဆံပင်တွေ ပြန်ထူလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ (၂) ခေါင်းမလျှော်ခင် ဆီတစ်မျိုးမျိုးနဲ့နှိပ်နယ်နည်း ဆံပင်တွေကျွတ်ပြီးပါးနေတဲ့အခါ ခေါင်းလျှော်ခါနီးတိုင်း အုန်းဆီ၊သံလွင်ဆီ ဒါမှမဟုတ် jojoba oil စတဲ့ အဆီတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ဦးရေပြားအနှံ့ ရွှဲနေအောင်လိမ်းကာ … Read more
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ်? ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ..။ သူများကို ကူညီလိုက်လို့ ကိုယ့်မှာ သုညဖြစ်သွား ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေနေတယ် ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သူတွေပါ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ စေတနာလည်း အရမ်းကောင်းသလို သံယောဇဉ်လည်း အလွန်ကြီးကြတဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လည်း လွယ်ပါတယ်..။ ခဏခဏလည်း စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် တတ်ပါတယ် စိတ်ကောက်လည်း ခဏပဲ။ ချော့မယ့်သူ ရှိရင်တော့ ဟန်အမူပိုပြီး ဆက်ပြီးတော့ စိတ်ကောက်ဟန် ဆောင်နေတတ်ပါတယ် ။ ချော့မယ့်သူ … Read more
စိတ်ချင်းဆက်တယ်ဆိုတာ ကြားဖူးကြတယ်မလား။ စကားလုံးအဖြစ် ပြောပြမရပေမဲ့ စိတ်ထဲကနေ သိနေတာမျိုး၊ မမျှော်လင့် တစ်ခုတည်းကို တူတူလုပ်မိနေကြတာမျိုး၊ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းမသိ ရုတ်တရက် ဖြစ်သွားတဲ့ အပြုအမူ/ခံစားချက်မျိုး၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စကားပြောစရာမလိုပဲ နားလည်နေသလိုမျိုး၊ မျက်လုံးချင်းဆုံရုံနဲ့ သူ ဘာပြောလဲ ကိုယ်သိနေတာမျိုး ပေါ့ …။ ဒီလို အခြေအနေတွေကို ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါက စိတ်ချင်းဆက်တဲ့ သူတွေမှာပဲ ရှိတတ်သလို မသိစိတ်ကနေ သိတဲ့ အလိုအလျောက်အခြေအနေတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင် သင်သိနေသလိုပေါ့။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်အကြောင်း တွေးနေတဲ့အခါ သင့်ကို နှစ်သက်နေတဲ့အခါတွေမှာ သင့်မှာ ဒီလို လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် …။ (၁) ရုတ်တရက် … Read more